पूर्वराजदूत झा हत्या प्रकरण : पाले र माली छुटे, अनुसन्धान गर्दा यातना ! | Ratopati
personराजेश भण्डारी exploreकाठमाडौं access_timeभदौ २९, २०७५ chat_bubble_outline0
महानगरीय अपराध महाशाखाले २४ दिन हिरासतमा राखेर सानुकान्छा, आइतसिंह र जय बहादुरबारे अनुसन्धान गरेको थियो । तर, पूर्व राजदुत झाको हत्यामा उनिहरुको संलग्नता पुष्टि गर्न नसकेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले उनीहरुलाई जनही ८–८ हजार धरौटी लिएर छाड्न आदेश दिएका छन् ।
त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जले दिएको पोष्टमार्टम रिपोर्ट अनुसार झाको मृत्युको कारण ‘घाँटीमा जबर्जस्ती गहिरो चोट’का कारण भएको उल्लेख गरिएको छ ।
महानगरीय अपराध महाशाखाले घट्नाबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ । तर, हत्यामा संलग्नको सामान्य पहिचान समेत खुल्न नसकेपछि घट्ना झनै रहस्यतर्फ धकेलिएको छ ।
अनुसन्धानमा संलग्न सुरक्षा अधिकारीहरुले घट्नामा संलग्नको सम्बन्धमा कुनै तथ्य–प्रमाण फेला पर्न नसकेको बताएका छन् ।
‘अहिलेसम्म केही निस्केको छैन’ अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृतले भने, ‘हेरिरहेका छौँ, हत्याका घट्नामा कतिपय अवस्थामा निश्चित समयपछि मात्रै अपराधीको पहिचान खुल्ने गरेको छ, माली र पालेको सम्बन्धमा पनि केही कैफियतहरु छन् ।’
भदौ ४ गते बिहान पाँचबजे नै मालीको काम गर्दै आएका दुईजना आइतसिंह तामाङ र जय बहादुर गुरुङ झाको घरमा पुगेका थिए । सहयोगीहरुले पानी भरेर बिहानको सवै काम सिध्याउँदा पनि झा नउठेपछि श्रीमतीले सेक्युरिटी गार्ड र मालिकै सहयोगमा ढोका खोल्दा उनी मृत अवस्थामा पल्टिरहेको अवस्थामा फेला परेका थिए ।
अनुसन्धान गर्दा यातना !
पूर्व राजदुत हत्याको अनुसन्धानको क्रममा केशवराज झाको घरमा १० वर्षदेखि सेक्युरिटी गार्डको काम गर्दै आएका सानुकान्छा तामाङले आफूमाथि प्रहरीले दुब्र्यवहार गर्दै यातना दिएको आरोप लगाएका छन् ।
प्रहरी हिरासतबाट छुट्नासाथ उनले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा उजुरी दिँदै आफूलाई यातना दिने प्रहरी अधिकारीमाथि कारवाहीको माग गरेका छन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग स्रोतका अनुसार तामाङको उजुरीपछि आयोगले यातना दिएको वा नदिएकोबारे अनुसन्धान शुरु गरेको छ ।
प्रहरीले पक्राउ परेका तिनैजनालाई पोलिग्राफ परिक्षण गराएको थियो । पोलिग्राफ परिक्षणका क्रममा सानुकान्छाले ‘ढाँटेको’ रिपोर्ट आएको बताइएको छ ।
कुटनीतिक क्षेत्रमा राम्रो दख्खल राख्ने झा १९९३ देखी १९९७ सम्म फ्रान्सका राजदूत थिए । पूर्व राजदूतहरुको निवर्तमान अध्यक्ष समेत रहेका उनले लामो समय चिफ अफ प्रोटोकलको भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।